निशा घिमिरे : भेन्टिलेटरमा पुगेर फर्किइन्, अवस्थामा सुधार Bizshala -
दुर्घटनामा परेर तीन वर्षदेखि मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेकी कलाकार घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले मोडल तथा कलाकार घिमिरेको जेठ २७ गते उद्धार गरेकी थिइन्। नर्भिकले सुरुआतदेखि नै उनको उपचारमा डेडिकेटेड स्वास्थ्यकर्मीको टिम नै खटाइदिएको छ।
कलाकार घिमिरेले केही दिनअघि आफ्नै दाँतले गाला टोकेपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएको थियो। रक्तश्रावका कारण श्वास फेर्न कठिनाइ भएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपरेको थियो। आफ्नै दाँतले टोकिएको गालाको भित्री भागमा टाँका नै लगाएर उपचार गरेसँगै उनको अवस्थामा सुधार भएको थियो। फलस्वरुप असार २१ गते भेन्टिलेटरमा राखिएकी कलाकार घिमिरेलाई असार २३ गतेदेखि नै पुनः भेन्टिलेटरबाट निकालिएको थियो। हाल उनी आफैँले श्वास फेरिरहेकी छन् र गालाको भित्री भागमा टोकिएर बनेको घाउसमेत निको हुने क्रममा रहेको छ।
नर्भिक अस्पतालले ह्विलचेयर थेरापी, म्युजिक थेरापीलगायतका विभिन्न विधिबाट उनको उपचार गरिरहेको छ। डा. पंकज जलान नेतृत्वको टिमले उनको उपचार गरिरहेको छ।
अस्पतालमा आउँदा जिउँदो लाशजस्तो रहेकी घिमिरेको अवस्था निकै सुधार भएको छ। उनले पछिल्लो समय बोल्ने समेत कोसिस गरिरहेकी छन्।
डा. जलानले निशाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका छन्। उनले नर्भिकले सकेसम्म सबै विकल्पमा गएर उनको उपचार गरिरहेको समेत बताए।
डा. जलानका अनुसार दुर्घटनाका कारण घिमिरेको ब्रेन इन्जुरी भएको र त्यसको अवस्था निकै जटिल रहेकोले पूर्ण रुपमा नर्मल हुने सम्भावना भने न्यून छ। ‘उनको ब्रेनमा निकै ड्यामेज भएको छ’, डा. जलानले भने, ‘तर, आएको बेलाको तुलनामा घाउहरु निको हुन थालेका छन्। हामीले डाइट र थेरापीमा फोकस गरेका छौँ। प्रोटिन, क्यालोरिजहरु प्रशस्त दिइरहेका छौँ।’
तीन वर्षअघिसम्म मिडियाहरुमा छाउने गरेकी मोडल घिमिरेको उद्धार गर्नुअघिको अवस्था निकै दर्दनाक थियो। चलेकी मोडल निशा आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउँदा घरमै अर्धचेत अवस्थामा थन्किएकी थिइन्। नर्भिकले उद्धार गरेपछि उनलाई सहयोग गर्नेहरुको समेत लर्को लागेको छ। उनको परिवारजनले बनाएको अक्षयकोषमा लाखौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।
तीन वर्षअघि अभिनयको कोर्स पढ्न घिमिरे भारत गएकी थिइन्। त्यहाँ भएको सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। दुर्घटनालगत्तै उनको भारतकै अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। तर, त्यहाँको अस्पतालको उपचार महँगो भएपछि कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनका बुबाआमाले छोरीलाई नेपालमै ल्याएका थिए।
नियमित थेरापी गर्नसमेत आर्थिक अभाव भएको र त्यही बीचमा कोरोनाको संक्रमण समेत बढेपछि उनी घरमै थन्किएकी थिइन्। यो अवधिमा निशाको अवस्थाको बारेमा समाचारहरु समेत प्रकाशन भएका थिए। तर, उनलाई उद्धार गर्न, उचित उपचार व्यवस्था मिलाउन कसैले पनि सहयोग गरेनन्।